Creepy Castle သငျသညျတွှေရန်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုအတွက်စိတ်ဆင်းရဲစရာပျက်ကွက်ပေမယ့်လက်ခံရရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ၎င်း၏မဟုတ်ဘဲချစ်စရာရှာဖွေနေမိကျောင်း 3,247 အဆသင့်ရဲ့ရှယ်ယာဆက်ဆက်ကဖျော်ဖြေမှု slot ကဖုန်းကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံဂိမ်းပါစေ.
Creepy Castle ၏ရေးသားသူအကြောင်း
ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2014, အခွင့်အလမ်းအသစ်တခုကုမ္ပဏီပေမယ့်တချို့ကအရမ်း chic နှင့် Feature-rich အွန်လိုင်းဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့အွန်လိုင်းဂိမ်း၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးအလားအလာစတင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤ အထိုင်ဖုန်းကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်းချန့်စသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် (NYX).
ဤ အထိုင်ဖုန်းကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်းငါးခု reels နှင့်တကွကြွလာခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားနေသည် 25 paylines. သို့သော်ဤ paylines fixed ကြသည်မဟုတ်နှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုနှုန်းအဖြစ်တိုးမြှင့သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအသီးအသီးလှည့်ဖျားလောင်းသောငွေပမာဏကိုလည်း fixed နှင့်လှည့်ဖျားနှုန်း 25p ကနေ£ 625 မှစတင်သည်သည်မဟုတ်. ဤ အထိုင်ဖုန်းကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့ကို iOS အဖြစ် Device ရဲ့အရေအတွက်ကကစားနိုင်ပါတယ်, အန်းဒရွိုက်, နှင့်သိသာ PC များနှင့်လက်တော့. သင်က screen ပေါ်မှာကာတွန်းစတိုင်ကာတွန်းလေးကွဲပြားခြားနားသောမိကျောင်းတို. သူတို့ဟာ Ballie များမှာ, ကြောကျ, Tally ကိုနှင့် Squido. ကနေတချို့စံကဒ်သင်္ကေတများရှိပါသည်9အဖြစ်ကောင်းစွာ ACE နှင့်သူတို့အနိမ့်ပေးဆောင်ခြင်းသင်္ကေတကိုကိုယ်စားပြုဖို့. ဒီဂိမ်းရဲ့လိုဂိုဂိမ်း၏ကြဲဖြန့်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းကြဲဖြန့်သင်္ကေတများ မှလွဲ. အခြားအရာအားလုံးအစားထိုးသော screen ပေါ်မှာပုံမှန်ရိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်.
ဒီ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ အထိုင်ဖုန်းကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်းတွေဟာ:
ကျပန်း Monster Wild- လေးပါးမိကျောင်းမဆိုခြေရင်းဂိမ်းကာလအတွင်းကျပန်းရိုင်းသို့ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်. သင့်အနေဖြင့်အခြေစိုက်စခန်းဂိမ်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့အများအပြားလေးအဖြစ်ကျပန်းလွင်ပြင်ရှိနိုင်ပါသည်. အဆိုပါကျပန်းလွင်ပြင်သင်တို့ကိုလည်းပိုမိုမြင့်မားဆုကြေးငွေပေးစေခြင်းငှါအခြားအခြေခံသင်္ကေတများနေရာတွင်အစားထိုးပါလိမ့်မယ်.
Creepy လှည့်ဖျား Feature ကို- တစ်ချိန်တည်းမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုမြင်ကွင်းကိုအတွက်ကြဲဖြန့်သင်္ကေတသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလေယာဉ်ဆင်းသက်ဒီ feature စတင်. ဒီ feature အစပျိုးပေးသောကြဲဖြန့်သင်္ကေတများ၏အရေအတွက်ကိုသင်ရရှိရန်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ၏နံပါတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်.
3 အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေနှင့်တကွသင်ဆုချပါလိမ့်မယ် 10 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
4 အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေနှင့်တကွသင်ဆုချပါလိမ့်မယ် 12 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
5 အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေနှင့်တကွသင်ဆုချပါလိမ့်မယ် 15 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
သင်ပုန်းခိုမိကျောင်းကိုလွှတ်ဖို့ screen ပေါ်မှာပစ္စုပ္ပန်ခြောက်ပါးတံခါးများအနေဖြင့်တံခါးများကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများကစားစတင်ခင်မှာ. သင်တို့ရှိသမျှသည်လေးပါးကိုမိကျောင်းကိုတွေ့ပါသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်စတင်မည်အခါသင်တံခါးနောက်ကွယ်မှ creepy လှည့်ခြင်းများကိုရှာဖွေတိုင်အောင်မမှီတိုင်အောင်ဤသည်ကိုဆက်လက်ဦးမည်. အဆိုပါဖြန့်ချိမိကျောင်းပုအင်္ဂါရပ်၏ကြာချိန်အဘို့ကိုတောသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်.
Creepy Castle ချန့်စ Interactive မှနေပျော်စရာအပြည့်ဖြည်နဂါး-ရေးရာ slot ကဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ slot ကအားလုံးသငျသညျအကြီးအဆုကြေးငွေရရှိနိုငျရှိရာကျပန်းရိုင်းနှင့် creepy လှည့်ခြင်းများအကြောင်း.